အလိုအလျောက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ Touchless ကားရေဆေး၊ Car Care ထုတ်ကုန် - OPS
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Touchless Car Wash ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူ
လက်ကားကားအသေးစိတ်ပစ္စည်းများ၊ စိတ်ကြိုက်ကားရေဆေး၊ စောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များ။
WE WHAT ကိုထောက်ပံ့ပါ
မြင့်မားသောထိရောက်မှု touchless ကားရေဆေးမှုန့်,
ကြိုတင်ဆေးခြင်းနှင့်ရေမြှုပ်သုတ်ခြင်းမလိုအပ်ပါ, အစွမ်းထက်သန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ရေ၊ အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။ ကားအဝတ်လျှော်ခြင်းတွင်ခြစ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ မော်တော်ယာဉ်၏တောက်ပတိုးမြှင့်။
လျှော်လုပ်နိုင်တဲ့သုတ် လျင်မြန်စွာဖုန်ကိုဖယ်ရှား။ ဒါဟာဒါရိုးရှင်းသောအဆင်ပြေပြေနဲ့ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဘီးအချက်အချာ၏မိုက်, lusterless နှင့်အခြားဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, မူရင်းတောက်ပြောင်ဖို့က restore! အမျိုးမျိုးသောဘီးအချက်အချာမျက်နှာပြင်များအတွက်သင့်လျော်သော။
ဒါဟာ super-အာရုံစိုက်ကားတစ်စီးအဝတ်လျှော်အရည်သို့လှည့်နိုင်ပါသည်, အလွန်ကုန်ကျစရိတ်ချွေနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့
ကားတစ်စီးရေဆေးခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆပ်ပြာနှင့်အတူရောနှောများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသန့်ရှင်းရေး! ထို့အပြင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်ပေမယ့်မသာ အော်တိုအဝတ်လျှော်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ.
အပင်ဖြစ်သည့် citrus ဆီထုတ်ယူရန်သဘာဝနှင့်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာအင်ဇိုင်းများကိုအသုံးပြုသည် ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီး All Purpose Cleaner သည်ကျန်သောပစ္စည်းများမပါ ၀ င်သောကြောင့်ကားများ၊ မိုးလုံလေလုံပတ် ၀ န်းကျင်၊ ပိုးကင်းသော antibacterial နှင့်လေကောင်းလေသန့်ရရှိရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။
1PC Windshield Washer Tablet သည် 4L wiper အရည်နှင့်တူညီသည်။ ၎င်းသည်လျင်မြန်စွာပျော်ဝင်ပြီးအိမ်လုပ် windshield wiper fluid ကိုထုတ်လုပ်သည်။ windshield အပေါ်ရှိဆီ film, shellac နှင့်သစ်ပင်စေးများကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးသည်။ နေရာလွတ်ချွေတာရန်လွယ်ကူသည်။
multi Effervescent Cleaner မှုတ်ဆေးဘူး
တစ်ဦးကဇီဝဗေဒ အစွမ်းထက်ဘက်ပေါင်းစုံသန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်။ ဒါဟာမသာအဝတ်အစားအစွန်းအထင်းအဘို့သင့်လျော်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းခိုင်ခံ့မီးဖိုချောင်ကရိယာအပေါ်ပိုးမွှားလျော့ကျစေ, သစ်သားကြမ်းပြင်, ရေချိုးခန်းကြွေပြား, အိမ်သာစတာတွေထုတ်လုပ်သူများကတိုက်ရိုက်အရောင်းအဖြစ်ပြုမူခြင်း, အသိအမှတ်ပြုကုန်စည်အာမခံပါသည်။
OPS အနံ့ဖယ်ရှားပေးသည့်ဆေးကိုချက်ချင်းဆေးကြောပါ အနံ့အားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ ကားဆီး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊ စီးကရက်အနံ့၊ အော့အန်ခြင်း၊ အနှီး၊ အမှိုက်သရိုက်များမှဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိနေသောအနံ့များကိုဖယ်ရှားပေးပြီးအနံ့မတည်ဆောက်နိုင်စေရန်အတွက်လန်းဆန်းစေသည်။ 100% သဘာဝ, ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်ထုတ်ကုန်, အဆိပ်မဟုတ်သောပုံသေနည်း, အသားအရေပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုရန်လုံခြုံ။
Wipe သုတ်ဆေးပိုးသတ်ဆေးပိုးသတ်ဆေး။ သင်၏လက်များကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်နှင့်ရုံးခန်းနှင့်အလုပ်ပစ္စည်းများကိုအကောင်းဆုံးသောအခြေအနေတွင်ထားရန်အမှန်လက်တွေ့ကျသောသုတ်ခြင်း။ 99% အန္တရာယ်ရှိသောကျောက်မျက်များသေဆုံးပြီးအတန်ငယ်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အစာမစားမီသောက်ရန်အန္တရာယ်ကင်းသည်။ coronavirus ကိုခုခံကာကွယ်ပါ!
ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်, 50ML, 100ML, 500ML, 1L ကနေလက်ကား sanitizer ဂျယ်လ်။ အသားအရေကျန်းမာရေးနှင့်သန့်ရှင်းမှုကိုတိုးတက်စေရန်အီသနောဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအနူးညံ့သောရနံ့ရှိသည်။ မကြာခဏအသုံးပြုရန်အတွက်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများ။ သန့်ရှင်းသောလက်ကိုထားပါ သင်၏မိသားစုအတွက်ကျန်းမာရေး
ကျနော်တို့ Ops ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကားသန့်ရှင်းရေးထောက်ပံ့ကုန်စေ, အိမ်ထောင်စုသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များ။
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်, Eco-friendly, degradation များမှာနျြးမာရေးအတှကျမဆိုအန္တရာယ်ဓာတုပစ္စည်းမယူ! ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်နိုင်ဘူး။
Zhejiang OPS ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းများဖြစ်သော R&D၊ ကားရေဆေးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း၊ အလိုအလျောက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ Windshield wiper fluid, Smoke, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အနံ့ဖယ်ထုတ်စက်မှုန်ရေမွှား, ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသတ္တုထုတ်ကုန်များ, လက်သန့်စင်ဆေးရည်, မော်တော်ကားကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်လွတ်လပ်သောဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများ၊ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် OPS အမှတ်တံဆိပ်သုတ်လိမ်းထားသောကားရေဆေးအမှုန့်များသည်အမျိုးမျိုးသောမော်တော်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်များ၊ ကား ၀ န်ဆောင်မှုဌာနများနှင့်အလှပြင်ဆိုင်ဆိုင်များမှကားသန့်ရှင်းရေးတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံလည်ပတ်မှကြိုဆိုပါတယ်နှင့်ဤထုတ်ကုန်စာအုပ်ဆိုင်!
ငါ shop.It သာလက်ဆေးနှုန်း3မိနစ်ကြာနှင့်တကယ့်အလုပ်ကောင်းမရှိ, ငါ၏အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့သုတ်-အခမဲ့ကားတစ်စီးရေဆေးအမှုန့်, ​​တယ်။ ယခုတွင်ငါသည်သီးသန့်ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုပါ။ ရေကို Save,
အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ခုတ်လှဲပါက Love !!
အံ့သြစရာသန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု, ချက်ချင်းအဝတ်လျှော်ပြီးနောက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, သင်မော်တော်ယာဉ်အသေးစိတ်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးအော်တို, Ops ရေအစက်အပြောက်စွန့်ခွာမည်မဟုတ်။ ဒီတော့လွယ်ကူသောအလုပ်လုပ်ကိုင်ဘို့!
ဒါဟာအထည်, ကော်ဇော, ပရိဘောဂ, မီးဖိုချောင်ပစ္စည်း, မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အနည်းငယ်ကအခြားအရာဗီနိုင်းအတွင်းပိုင်းအပေါ်ကြောက်မက်ဘွယ်သန့်စင်။ ဒါဟာနီးပါးတိုင်းညစ်ပတ်ငါတတျနိုငျသဘယ်တော့မှကြောင့်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ယခုငါကြိုးစားခဲ့သောအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါလက်အိတ်မပါဘဲအသုံးပြုရန်မရှိအနံ့ရှိပြီး, အရေပြားအတွက်မီးမရှို့ဘူး။ ဒါဟာတကယ်ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်စျေးပေါထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်!
No.1010,3အဆောက်အအုံ, Wanda Piazza, Taizhou, Zhejiang, တရုတ်။
အဆိုပါရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုလူ့ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ ကျေးဇူးပြု. သစ်ပင်.